Ogow Wax Kasta Uga Baahan Tahay Madrid v Dortmund » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Champions League/Ogow Wax Kasta Uga Baahan Tahay Madrid v Dortmund
Ogow Wax Kasta Uga Baahan Tahay Madrid v Dortmund
Muna Hassan December 7, 2016
Labada kooxood ayaa ku dagaalamaya ku dhameysashada kaalinta koowaad ee group-ka maadaama ay horay u soo wada baxeen wareega knockout oo uu hal kulan ka harsan yahay.
Si kastaba ha ahaatee, Dortmund ayaa ku jirta booska koowaad ee group-ka F iyadoo laba dhibcood ka horeysa kooxda reer spain ee Real caawana ay isku dgan yihiin,waxaana ay Madrid u baahan tahay inay guuleesato si ay kaalinta koowaad dhameysato.
Weeraryahanka dalka Wales Gareth Bale ayaa noqonaya kaliya ciyaaryahanka muhiimka ah ee kooxda sare , kaasoo ka maqnaanaya kooxda, waxaana 27-sano jirkaan uu nasiino ku maqnaanayaa ilaa afar bilood, ka dib markii qaliin canqowga ah lagu sameeyey dhaawac soo gaaray 29 November.
Waxaa khabar wanaagsan heysta taageerayaasha kooxda , maadaama uu kooxda kusoo laabanayo wiilka qadka dhexe ka ciyaara Toni Kroos kasoo qabay dhaawac cagta ah, halka weeraryahanka Alvaro Morata uu isna kasoo ka soo kabsaday dhaawac muruqa ah kana soo muuqday xerada tababarka naadiga.
Dhanka kooxda DORTMUND waaxaa ay weyn doontaa laacibkeeda Sven Bender, Roman Bürk, waxaana laga yaabaa inuusan soo galin kursiga keydka xitaa caawa, halka sidoo kale uu isna shaki ku jiro safashadooda xiddigaha kala ah Erik Durm, Marcel Schmelzer, Raphaël Guerreiro, kuwaas oo dhamaantood kooxda k maqnaan doona sida la aaminsan yahay.
Madaax Ka Ogtahay Kulanka:
Tababare Zidane ayaa caawa hogaamin doona kooxdiisa kulankiisii 50-aad isagoo macalin u ah , waxaana uu sheegay inuu u baahan yahay guul muhiim ah oo uu ka gaaro naadiga dalka jarmalka.
Labada koox ayaa koor hore kasoo gudbay wareega group yada , waxayna caawa ku dagaalamayaan uun booska koowaad.
Dortmund ayaa hal gool u baahnaan doonta caawa si ay u sameyso Record goolasha ah ee dhanka groupyada.
Madrid ayaa guuleesatay shan kulan oo lasoo dhaafay, iyadoo caawa u baahan kii lixaad.
Waxa Maqan: Kroos (metatarsal), Bale (ankle), Morata (hamstring)
Maqan: Götze (knee), Bürki (hand), Guerreiro (muscle strain), Subotić (knee), Kagawa (ankle), S Bender (fitness), Nuri Şahin (knee)
Hal jaalo xiddiga ku maqnaanaya haduu helo: Guerreiro
Daawo goo gooska Basel 1 - 4 Arsenal + Sawiro dabaal dagii Arsenal Aaway reer Arsenal
Liverpool Oo £1m Ku Bixisay Badbaadada Mario Balotelli